Mitady andian-tsindrim-peo ve ianao? Mandehana any amin'ireo torohevitra avy amin'ny Expert Expert
Mety ho hitanao hoe spam referendum ao amin'ny Google Analytics ianao. Manimba ny endrik'ilay tranonkala eo amin'ny aterineto izany ary mety tsy ho tapitra amin'ny tatitra ataonao. Ankoatra izany, mamorona olana maro ho an'ireo mpampiasa ny spam referral ary mandany ny fotoanao amin'ny Internet. Manana fahafahana hanova ny teti-bola momba ny varotra ho an'ny ankamaroany. Tsy misy teny vaovao ny spam referral. Efa hatramin'ny taona maro izany, ary toro-hevitra samihafa no nomen'ny Google sy ny mpividy azy mba hanafoanana izany.
Fampidirana amin'ny spam referral
Nik Chaykovskiy, mpanazatra ambony avy amin'ny Semalt , dia nanomana ity lahatsoratra mahaliana momba ny spam referral, manome antsika fampahalalana mahasoa sy torohevitra momba ny fomba hisorohana izany. Voazarazara ho karazany roa izy io: spam referendum mpitsikilovana sy spam referral fanta
Tonga avy amin'ny spam ny famindrana Ghost raha toa ka mandefa tahirin-kevitra tsy misy dikany mivantana ao amin'ny kaontinao Google Analytics amin'ny alalan'ny Protocol Measurement tsy misy fitsidihana ny tranonkala. Tsy afaka mitsidika ny tranonkalanao ny spam referendum, saingy hita ao amin'ny tatitry ny Google Analytics foana ilay sidina. Raha misy spam mitsidika ny tranonkalanao, dia hita fa isan-jato isan-jato ny taham-pitenenana.
Manana spam amin'ny angona ve ianao?
Mamorona tebiteby ao amin'ny tranonkalanao ny spam referral ary sarotra ny miatrika. Azonao atao anefa ny mahita ireo spammers sy hackers izay mety hampiseho ireo fomba fijery ao amin'ny tatitra Google Analytics anao. Ho an'ity, tokony handeha any amin'ny sehatry ny Acquisition ianao ao amin'ny Google Analytics ary manara-maso ny fampahalalanao rehetra. Raha mahita ny iray amin'ireny tranonkala ireny ianao dia tokony hanakana azy tsy ho ela..4webmasters.org, button-for-website.com, trafficmonetize.org, webmonnetizer.net, event-tracking.com, darodar.com, ary get-free-traffic-now.com no ohatra mahazatra mikasika ny loharanom-pamokarana fanavaozana.
Mijanòna tsy hiraharaha ity fandrahonana ity
Nametraka fanontaniana maro samihafa ny manam-pahaizana momba ny fomba handosirana spam amin'ny lafiny maro. Ny ankamaroan'ny webmasters dia mihevitra fa azo antoka ny angon-drakitra nomena azy satria azo jerena ao amin'ny Google Analytics foana ny hitsiny. Saingy ny marina dia tsy azo antoka ny angon-drakitra ary tsy tokony horaisina ho toy izany.
Spam referendum fanakanana
Ilaina ny fisorohana ny fitsangatsanganana ao amin'ny Google Analytics raha vao haingana. Ny fiarovana ny vohikalanao sy ny sehatra rehetra dia ny hany fomba ahafahan'ny orinasa hiaina ao amin'ny aterineto. Amin'ny voalohany dia haka fotoana hianarana ny fomba rehetra sy ny tricks rehetra. Ireo mpandraharaha ara-dizitaly dia milaza fa afaka manadio ny angon-drakitra ianao amin'ny fananganana filtres. Ny dingana voalohany dia ny manome alalana ny kaonty Google Analytics ary hanamarina ny tatitra tsy tapaka. Ny dingana manaraka dia ny fampiasana ny safidy IsReferralSpam mba hanadiovana ny fivoriana rehetra. Taty aoriana, tokony mamorona tatitra ianao ao amin'ny kaonty Google Analytics mifototra amin'ny angona vaovao.
Tsy ara-dalàna ve ny fifamoivoizanao?
Raha manana olana ianao amin'ny fandraisana fepetra marobe tsy misy SEO, dia misy ny fahafaha-miditra amin'ny tranonkala. Ny fomba tsara indrindra hanafoanana azy ireo dia mamorona sivana ary manakana ny adiresy IP aminy raha vao azo atao. Misy ny fahazoan-dàlana handefa mivantana ny fifamoivoizana, saingy ny kalitaon'ny toetrany dia maromaro. Ny fifamoivoizana mivantana dia avy amin'ny media sosialy, ary izany no azonao ianteherana Source .